Ciidamada Etoobiya oo gooba kale oo muhiom ah ka qabsaday Dagaal yahanada Tigareda | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Etoobiya oo gooba kale oo muhiom ah ka qabsaday Dagaal yahanada...
Ciidamada Etoobiya oo gooba kale oo muhiom ah ka qabsaday Dagaal yahanada Tigareda
Ciidamada federaalka Itoobiya ee dagaalka kula jira xoogaga sida weyn u hubeesan ee Tigrey ayaa guulo waa weyn ka sheegtay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalooyin kuyaala gobolka Tigrey.
Dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo xoogaga Tigrey ayaa sii xoogeesanaya kuna sii fidaya magaalooyin hor leh, waxaan dagaalka laga cabsi qabaa in uu gaaro magaalooyin ay aad ugu xoogan yihiin Tigrey.
War kasoo baxay milatariga federaalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda la wareegeen magaalooyinka Aksum iyo Adwa , waxa ayna milatariga sheegeen in ciidamadii dagaalka kula jiray ay is dhiibeen.
Ma jiro ilo madax banaan oo xaqiijiyay sheegashada dowlada federaalka Itoobiya ee ku aadan magaalooyinkan ciidamadooda la wareegeen, waxaana wali gobolka Tigrey ka maqan adeega isgaarsiinta iyo Internetka.
Previous articleBeesha Caalamka oo ka soo hor jeestay mar kale Gudiga doorashada ee laga magacaabay Villa Somaliya
Next articleSidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey siyaasiga CC Shakuur?
Maamulka gobolka Banaadir oo mar kale diginin iyo hanjabaad cusub u...
Maamulka gobolka Banaadir ayaa diginin iyo hanjabaad cusub u jeediyey musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ah, maalmo kadib markii duqa Muqdisho Cumar Filish oo aayado...
Booliska Senegal oo xabsiga u taxaabay aabe dhalay wiil 15-jir ah...